LEVIATANA NA RIVO-DOZA · L'Homme, son aura et son évolution
> LEVIATANA NA RIVO-DOZA
Classé dans : — cyrius @ 11:06
Ity ilay rivo-doza, ilay leviatana lazain’ny baiboly ho bibilava miforiporitra. Is 27,1
Rivo-doza i leviatana fa tsy biby ; joba 40 : 25-32 ; ISAIA 27 : 1
Ireto avy ny teny manaporofo an’izany ato amin’ireto andininy ireto :
Bibilava mioloikolika :
Tsy toy ny bibilava miolikolika ve ny rivo-doza raha jerena amin’ny sary ? Mioloikolika toy ny bibilava ny lalomena.
FANAZAVANA ARA-PANANDROANA : Raha atambatra ny andininy rehetra ato amin’ity andininy ity sy ny andininy hafa milaza fa fetsy ny bibilava ; bibilava no namitaka an’i Eva, dia ahafahantsika manaporofo fa ny rivo-doza tokoa ity miolikolika toy ny bibilava voalaza eto ity.
Ny antony, mifandray amin’ny efitranom-bintana 11 izay ny adalo ny olikolika sy ny hafetsena, izay manondro tokoa ny saina sy ny rivo-doza.
FANAZAVANA KABBALISTIKA : Miolikolika toy ny spiral ny endriky ny rivo-doza, toy ny bibilava tokoa.
Olikolika koa ny sary fanehoana ny antokom-bintana adalo na verseau, izay manondro ny rivo-doza, eto.
Tsy mitovy ny spiral sy ny olikolika toy amalona an-drano fanehoana an-tsary ny verseau na adalo, fa iray ihany nefa ireo.
Raha jerena amin’ny hyéroglyphe hébreu, dia ny litera faha 4, Daleth no mampifandray an’ireo : olikolika, spiral, toy ny bibilava.
Ny daleth izay milaza fiaraha-miasa ny verseau koa toy izany.
Tsy bibilava nefa izy eto na verseau aza ny bibilava, rivo-doza izy eto, hafetsena no anisan’ny porofo fanampiny mampifandray azy amin’ny verseau na adalo, izay ahafahantsika manondro avy hatrany ny rivo-doza.
Misy andininy hafa ao amin’ny baiboly mameno an’ity manao hoe » ao amin’ny masony no misy ny heriny », ary dia ny rivo-doza tokoa izany.
Na tsy hohadihadintsika aza ny ambiny rehetra, ampy ireo porofo ireo. Nefa ny saina tsy mety afa-po, ka omeko indray ny hafa, fa ataoko kabarin-drainisalama e, ny sisa manaraka ihany.
FILAZANA AZY AVY AO AMIN’NY BAIBOLY
ISAIA 27 : 1
1 Amin’ izany andro izany ny sabatr’ i Jehovah,
izay mafy sady lehibe no mahery,
no ho entiny mamaly an’i leviatana, dia ilay menarana mandositra,
dia ilay menarana miforiporitra, Ary hovonoiny ilay dragona ao an-dranomasina.
joba 40 : 25-32
25Mahasarika an’i Leviatana amin’ny farango va hianao,
sy mahageja ny lelany amin’ny mahazaka?
26Sa mahatsofoka zozoro amin’ny vavorony,
sy mahaboroaka ny valanoranony amin’ny masom-by?
27Hifon-jato amin’arivo aminao va izy,
hanao teny malefaka aminao?
28Hanao fanekena aminao va izy;
ka halainao ho mpanompo mandrakizay?
29Hilalao azy toy ny filalao fody va hianao,
sy hamatotra azy holalaovin’ny zanakao vavy?
30Ataon’ny mpiara-manjono varotra va izy,
ka tsinjaranjarainy amin’ny mpandranto?
31Mahaloadoaka ny hodiny amin’ny zana-tsipika va hianao,
na mahatrobaka ny lohany amin’ny firombaka?
32Andramo ny hisambotra azy,
ka tsarovy ny ady, fa tsy hanindroa intsony hianao.
Tsy voaibe izany i leviatana, ny porofo tsotra, tsy ny voay no mafy indrindra amin’ny zava-boahary,
Efa mihavitsy ary izao ny voay noho ny fihazana azy.
Tsy hainao angaha ilay ohabolana manao hoe « Izaho ve no namono ny voay ka hafa no iravaka ny vanginy ? «
Mbola hozaraintsika eto koa fa volkano i Behemota fa tsy lalomena.
Ho anareo mpanoratra sy mpandika baiboly, aza manova na inona na inona ao anatin’ilay andinin-teny,
avelao amin’izao dia toerana hafa anehoana ny hevitrao.
Raha misy manana ny baiboly teny malagasy tranainy indrindra amin’ny teny malagasy,
zarao fa iny no mora ahalalana ny zava-miafina indrindra ao anatiny.